अबदेखि ४ हजार ४०० रूपैयाँमै कोरोना परिक्षण हुने – Social Touch Khabar
अबदेखि ४ हजार ४०० रूपैयाँमै कोरोना परिक्षण हुने
सोसलटच खबर August 30, 2020
काठमाडौँ । सरकारले गत आइतवारदेखि नै लागु हने गरी कोरोना भाइरस परिक्षणका लागि गरिने पिसिआर विधिको शुल्क घटाएको छ । यसअघि ५ हजार ५०० रहेको सो शुल्कमा कटौती गर्दै अबदेखि ४ हजार ४०० रूपैयाँ कायम गरिएका छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले कोरोना परिक्षणका लागि गर्नुपर्ने पिसिआर विधिमा लाग्दै आएको शुल्कमा १ हजार १०० रूपैयाँ घटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार परीक्षणको व्यवस्था परिमार्जन गरिएसँगै शुल्क पनि घटाइएको छ ।
अब अधिकतम कूल ४ हजार ४०० रूपैयाँ लिएर परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यसअघि ५ हजार ५०० रूपैयाँमा सेवा शुल्क थप गरी लिन पाउने व्यवस्था थियो । उपत्यकाका तीनवटा र अन्य ६ वटा प्रदेशमा ६ वटा सरकारी अस्पतालमा पनि शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सकिने छ । परीक्षणको अनुमति प्राप्त निजी र सरकारी दुवैथरी अस्पतालमा घटाइएको शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सकिने छ । सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले भने, ‘निर्धारण गरिएको नयाँ शुल्कभन्दा धेरै कसैले पनि लिन नपाउने मन्त्रालयको निर्णय छ । सो निर्णय आइतवारदेखि नै लागु भएको छ ।’
मन्त्रालयले अब तीनवटा मापदण्डका आधारमा मात्र कोरोनाभाइरसको निशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आवश्यकभन्दा अनावश्यकरूपमा धेरै मात्रामा परीक्षण हुन थाल्यो कि भनेर परीक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले भने, ‘अब सङ्क्रमितको निकट सम्पर्कमा आएका, लक्षण देखिएका र अग्रभागमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । अन्य व्यक्तिहरूले शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्नेछन् ।’
सरकारले निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेकाले कतिपयले आशङ्काकै भरमा परीक्षण गराउन खोज्ने र भनसुन बढी हुने गरेको खबरबीच मन्त्रालयले नयाँ निर्णय लिएको हो । डा. अधिकारी भन्छन्, ‘परीक्षणले दिने प्रतिफल र त्यसमा लाग्ने लागतलाई पनि हेर्नुपर्ने भएकाले यसअघि उदार भएर गरिँदै आएको परीक्षण व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हो ।’ तीन प्रकारका व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिले परीक्षण गराउन चाहेमा शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
शुल्क लिएर परीक्षण गर्न ११ वटा निजी अस्पताललाई अनुमति दिइएको छ ।
सोमबार तपाईंको राशिफल कस्तो रहेको छ ?